कुलमानको भाग्य फैसला गर्ने अधिकार पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले दिए यस्तो आदेश, हितेन्द्रदेव तनावमा ! – GALAXY
कुलमानको भाग्य फैसला गर्ने अधिकार पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले दिए यस्तो आदेश, हितेन्द्रदेव तनावमा !
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ समर्थकहरुमा खुसीयाली छाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । कुलमान विरुद्ध रिट हालेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई झड्का लागेको हो ।
सर्वोच्चले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन । तर, अदालतले घिसिङको नियुक्तीको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । आज (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरिएको मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।
कुलमानको नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शाक्यले आफूलाई पूनर्वहालीको मागसमेत गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको भाग्य फैसला चाडै हुदैंछ । कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा परेको हो । रिट जबराको इजलासमा दुई नम्बरमा छ ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै शाक्यले दिएको रिटमा गएको बुधवार बहस हुन सकेको थिएन ।
आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गरे पनि कारणविना गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको शाक्यले दाबी गरेका छन् ।